Kooxaha Arsenal, Man United, iyo Liverpool oo isku diyaarinaya inay soo qaataan xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(Yurub) 06 Seb 2020. Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa shaaca ka qaaday in kooxaha waa weyn ee England ay xiiseynayaan inay la soo wareegaan xiddiga reer France iyo naadiga Barcelona ee Antoine Griezmann, inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Barcelona ayaa xagaagii hore Antoine Griezmann kala soo wareegtay kooxda ka dhisan caasimada Madrid ee Atletico Madrid lacag dhan 120 million euros.
Laakiin xiddiga reer France ayaan bixinin heerkii laga filayay kaddib imaatinkiisa kooxda Barcelona, taasoo ka dhigtay in lala xiriiriyo suurtogalnimada uu kaga bixi karo Barca xagaagan.
Wargayska ayaa tilmaamay in Griezmann uu ku dhawaaday ka tagista kooxda Barcelona ka hor inta uusan imaanin macalinka cusub ee Ronald Koeman, iyo wararka la xiriiray bixitaanka xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in ciyaaryahanka uu go’aansaday inuu sii joogo kooxda kaddib markii uu Ronald Koeman u xaqiijiyay inuu noqon doono ciyaaryahan muhiim ka ah shaxda cusub ee kooxda.
Laakiin kaddib go’aankii uu Lionel Messi ku gaaray inuu la sii joogo Barcelona, ​​iyo dib ugu soo laabashada Philippe Coutinho ee kooxda, Griezmann ayaa dareensan inuusan heli doonin fursada uu sheegay Ronald Koeman.
Haddaba Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa sheegay in kooxaha Arsenal, Manchester United, iyo Liverpool ay ka faa’iideysteen fursadan, waxayna muujiyeen xiisaha ay u qabaan saxiixa Antoine Griezmann, inta lagu jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga, kaddib markii uu dareemay inuusan fursad buuxda ka heli doonin Ronald Koeman xilli ciyaareedka cusub.
Kooxda Arsenal oo isku diyaarineysa in dalab cusub ay ka gudbiso Thomas Partey